I-Izotope RX: Ungawususa Kanjani Umsindo Wangemuva Kokuqoshwa Kwakho Izwi | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 12, 2017 NgoLwesibili, Septhemba 12, 2017 Douglas Karr
Ayikho into ebhebhethekisa njengokubuyela ekhaya uvela emcimbini, ufake ama-headphone wakho wesitudiyo, futhi uthole ukuthi bekukhona umsindo wethoni yangemuva ekurekhodweni kwakho. Yilokho nje okwangehlelayo. Ngenze uchungechunge lwe-podcast yokuqopha emcimbini futhi ngakhetha ama-lavalier microphone kanye ne-Zoom H6 rekhoda.
Besingenayo indawo yokuzinikezela yokuqopha, besimane sihlale etafuleni kude nezixuku… kepha akusizanga ngalutho. Ukube benginomxube wami neminye imibhobho yesitudiyo, bengingahle ngikwazi ukusula okuningi ngemuva kodwa le micikilisho ye-lavalier ithathe yonke imisindo emincane! Ngangichotshoziwe.
Ngakho-ke, senze ukuhlolwa okuthile ngamathuluzi we-Audacity wokususa imisindo yangemuva kepha uma sishintsha izilungiselelo, izwi laqala ukuzwakala njenge-wonky. Ngithumele le nkinga kwiforamu engiyithandayo ye-podcast nomngani wami omangalisayo, UJen Edds Kunconywa ngokushesha Izotope RX6, ithuluzi lokuma lodwa lokulungisa amafayela alalelwayo.
Ngaphandle kokuqeqeshwa noma ukubuka ividiyo ye-Youtube, ngavela ithrekhi yami yomsindo esabekayo kuthuluzi, ngachofoza I-Voice De-noise, ngacishe ngamanzisa amabhulukwe ami njengoba ngilalele umsindo wangemuva umane unyamalale!
Uma ucabanga ukuthi ngakha lokhu… ngiqhubekile ngabelana ngamazwibela emiphumela. Kuyamangaza impela! Inothi eliseceleni - Angikulandisanga lokhu estudiyo sami, ngisebenzise umakrofoni wedeskithophu kuGarageband… ngakho ungangihluleli.
I-Izotope RX6 Voice De-noise okwamanje isendalini nge $ 99 isuka ku- $ 129. Lokhu kudingekile kunoma iyiphi i-podcaster ezithola ilwa nomsindo wangemuva ekurekhodweni kwayo - kusuka ngokuchofoza, kuya kuma-hums, ekunqampeni, nokuningi. Ngisanda kusebenzisa imodi eguqukayo nokusetha kabusha, kepha empeleni ungasebenza kufayela lakho lomsindo njengokungathi ubuseFotohop elinenqwaba yamathuluzi akhiwe.
Thenga i-Izotope RX6 Voice De-noise
Tags: umsindo wangemuvaUkususa umsindoizotopeizotope rxizotope rx6susa umsindo wangemuvasusa umsindo